Ahlu Suna oo u dhabar jeedisay DF Soomaaliya.
DHUUSAMAREEB(P-TIMES)- Warar aan ka helnay Hoggaanka Dhexe ee Ahlu Sunada Galgaduud, waxay ii cadeeyeen in ay hakiyeen isfahamkii ay dhawaan lagaareen Dawladda Federaalka Soomaaliya, kaas oo ay ka mid ahaayeen in Amniga iyo ciidamadaba lagu wareejiyo Xukuumadda Federaalka.
Wadaadka lagu magacaabo Sh Shaakir oo amar kahelaya Hoggaamiyaha kooxda Ahlu Suna Macalin Maxamuud Sh Xasan ayaa u sheegay saraakiisha Ammaanka Ahlu Suna in aysan ka amar-qaadan karin, cid aan aheyn Macalin Maxamuud.
Ahlu Suna waxay sheegtay in wax kasta ALIF laga soo bilaabayo, taas oo ay sheegtay in ay dawladda Soomaaliya ka baxday heshiiska.
Saraakiisha Ahlu Suna qaar kamid ah oo dhawaan dalacsiin kahelay dawladda Soomaaliya, ayaa sheegay in ay kushaqeynayaan amarada hoggaanka Ahlu Suna.
Warar ay heshay PTIMES ayaa daaha ka rogaya in khilaafka dawladda iyo Ahlu Suna uu ahaa mid taagnaa maalmihii ugu dambeeyey, ayna Ahlu Suna dhibsatay ficilada dawladda oo ay sheegeen in ay doonayaan hab qabaail in ay u kala qeybiyaan kooxdaas.